दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध भारतीय टेस्ट टिमको घोषणा हुँदै, राहुल आउट र रोहित इन ! - Everest Dainik - News from Nepal
दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध भारतीय टेस्ट टिमको घोषणा हुँदै, राहुल आउट र रोहित इन !
काठमाडौंः भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीच हुन गइरहेका टेष्ट सिरिजका लागि खेलाडीको नाम छनौट हुने भएको छ । मिडियामा प्रकाशित समाचार अनुसार, आजको छनौटमा लोकेश राहुल आउट हुने सम्भावना रहेको छ । उनको स्थानमा रोहित शर्मा प्लेइङ ११ मा पर्न सक्छन् ।
भारतीय क्रिकेट टिमका महत्वपूर्ण ब्याट्सम्यान रोहितलाई वेष्ट इण्डिजविरुद्धको खेलमा प्लेइङ ११ राखिएकाे थिएन । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध हनुमा बिहारी र अजिंक्य रहाणेलाई पाँचौ क्रममा राख्ने सम्भावना देखिएको समाचारपत्रहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
रोहितले सन् २०१८ मा अष्ट्रेलियाविरुद्ध अन्तिम टेष्ट खेलेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध चेतेश्वर पुजारा तेश्रो र कप्तान बिराट कोहली चौथो नम्बरमा रहन सक्छन् । यदि राहुल आउट भए भने कोच र कप्तानका अगाडि रोहितलाई ल्याउन बाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।
त्यसो त गुजरातका प्रियांक पन्चाल र पन्जाबका शुभमन गिल पनि यो दौडमा रहेका छन् । टीम व्यवस्थापकले मन पराएका राहुलले आफ्नो अन्तिम ३० टेष्ट पारीमा जम्मा ६६४ रन मात्रै बनाउन सकेका छन् । यसमा उनको शानदार प्रदर्शन गत वर्ष इंग्ल्याण्डविरुद्धको पाँचौ टेष्ट थियो । त्यहाँ उनले १४९ रन बनाएका थिए । अनुमान गरिए अनुसार, १५ सदस्यीय टीममा रोहित र इश्वरन दुबैले स्थान बनाउन सक्ने छन् ।
आलराउण्डर हार्दिक पाण्ड्या पनि टीममा फर्किन सक्छन् । नवदीप सैनीलाई ब्याकअप तीब्र गतिको बलरका रुपमा समावेश गर्न सकिने छ ।
दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध भारतको सम्भावित टिमः मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, हार्दिक पाण्ड्या, ऋषभ पन्त, ऋद्धिमान शाहा, जसप्रीत बुमराह, इशान्त शर्मा, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, रविचन्दन आश्विन, रविद्र जडेजा ।
दाैडमा यी पनि छन्
तेस्रो क्रमका ब्याट्सम्यान: अभिमन्यु ईश्वरन र प्रियांक पंचाल
ब्याकअप खेलाडी- नवदीप सैनी
ट्याग्स: भारतीय टेष्ट टीम